Home Wararka Shariif Xasan oo faah faahiyay safarkii Maanta laga hor-istaagay
Shariif Xasan oo faah faahiyay safarkii Maanta laga hor-istaagay
Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo Maanta loo diiday in uu u safro magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay laana celiyay Garoonka diyaaradaha Aadan-Cadde ayaa faah faahin ka bixiyay ishor-istaagii lagu sameeyay safarkiisa.
Shariif Xasan oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ishor-istaaga Maanta lau sameeyay ay aheyd mid uusan fileyn, isla markaana loo diiday diyaaradii u kireyneyd inay u duusho Magaalada Baydhabo.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in safarkiisa Magaalada Baydhabo uu shalay u qorsheysnaa balse loo sheegay in wax diyaarad ah aysan baxeyn, isla markaana Maanta markii uu isku dayay in uu u duulo Baydhabo loo diiday.
Shariif Xasan Sheekh Aadan sidoo kale wuxuu sheegay in Madaxweynaha koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (laftagareen) uu inkiray malaaqii Beeshiisa ee lahaa saxiixa kursiga Hop#261, wuxuuna ka codaday in uu joojiyo ficilada uu wado Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Ciidamo gadood ka sameeyay Beledweyne
Next article[XOG] Kulan magaalada Doha dhex maray Farmaajo iyo Amiirka Dalka Qatar
Gabar iska soo tuurtay dabaq kamida dabaqyada ku yaala Magaalada Muqdisho
Guddiga Doorashada FEIT oo Digniin culus u diray xubno damacsan tallaabooyin...